Usoro nhazi nke nsonye ntụpọ na nkedo epc | Yingyi
1 Mmebi nsonye na nkedo epc
Mmejọ nsonye na nkedo epc bụ ihe a na-ahụkarị. Mmejọ nsonye na nkedo epc na-ebelatakarị njirimara nke nkedo. N'otu oge ahụ, n'ihi ọdịdị na-adịghị ahụkebe nke nsonye, ​​ọ nwere ike ịkpata mgbawa ma ọ bụ ọbụna mgbawa na nkedo n'oge ọrụ. Nrụrụ nsonye ọ bụghị naanị na-ebelata ihe nkedo, kamakwa ọ na-emezi ike ike mpaghara nke nkedo ahụ n'ihi ntụpọ dị n'elu, nke nwere ike iduga n'ụzọ dị mfe n'elu igwe na-arụ ọrụ siri ike, na-emetụta mbelata arụmọrụ na mmebi ngwá ọrụ. Nrụrụ nsonye na nkedo epc bụ ụyọkọ na-adịghị agafe agafe nwere njupụta nsonye na-ezighi ezi na porosity, nke a makwaara dị ka slag porosity.
1.1 Ụdị ntụpọ nsonye na ihe nkedo epc
Mmebi nsonye nke ihe nkedo epc bụ slag, slag porosity na nsonye ájá. Ọdịdị nke ntụpọ na-adịkarị iche iche, ọdịdị ọdịdị ya na-adịghị agbanwe agbanwe, nha dị iche iche, na nkesa ụyọkọ, slag na slag pores na-adịkarị oji na isi awọ, agba dị iche iche. E nwere powdery bekee na ntụpọ olulu, ma ọ bụ oge ufodu metallurgical slag na metal mmiri mmiri, ma ọ bụ siri ike residues si pyrolysis nke yiri ihe, ma ọ bụ agba n'ime oge mgbe ma ọ bụ mgbe ìhè isi awọ powdery bekee.
1.2 gụnyere akụkụ ndị na-adịkarị mfe nke furu efu nkedo ebu
Ntinye n'ime ihe nkedo furu efu dị mfe ime, yana enwere ụfọdụ iwu dịka usoro nkedo dị iche iche, nhazi nke ebu, teknụzụ mmepụta na ọnọdụ. Ihe mere e ji emepụta ihe na-ejikọta na ọdịnaya nke ihe fọdụrụ na mmiri mmiri mmiri, usoro nke nrụgide na-adịghị mma, ọnọdụ nke mmiri mmiri na-agbapụta na usoro siri ike nke nkedo. Maka ihe nkedo ígwè nwere mgbidi dị mkpa na nguzogide okpomọkụ, na-eyi nguzogide na nguzogide corrosion, ntụpọ porosity ma ọ bụ slag oghere dị mfe ime, tumadi na akụkụ ndị ejikọrọ na ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ riser. Akụkụ ndị jikọtara na nkedo nkedo ndochi usoro, na-erugharị ruo ogologo oge, iji mee ka oge okpomọkụ dị ogologo, nchara mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe nkedo na-agbaze akụkụ, na-etinyekwu gas na nchara mmiri na nsonye site na igbochi. ìgwè, gbazee ígwè jụrụ na solidification shrinkage, mfe ime ka akụkụ ndị a mgbe obi jụrụ solidification ụdị oghere, shrinkage porosity, slag mbuaha ntụpọ.
2 Ndochi usoro nkedo anwụ furu efu
A na-etolite ntụpọ nkedo n'oge nkedo ndochi na usoro siri ike. N'ozuzu, oge njuputa nke obere obere na ọkara nke nkedo bụ nanị sekọnd ole na ole, ihe karịrị sekọnd iri ma ọ bụ iri iri, na oge njuputa nke nnukwu ihe nkedo na-agwụkwa n'ime nkeji ole na ole. Dị iche na nkedo oghere nkịtị, ihe dị iche iche nke ndochi ebu na nkedo epc bụ isi ihe kpatara nguzobe ntụpọ nsonye.
2.1 Na-ejuputa ụdị nkedo epc
Banyere furu efu nkedo nkedo mmiri mmiri metal usoro ndochi, mmiri mmiri metal na-ejuputa morphology, si n'ọnụ ụzọ ámá banye na nkedo, mgbe "oghere" metal fan na-etolite n'ihu ókè, n'okpuru mmetụta nke ike ndọda, mmiri mmiri metal na-ejuputa n'ókè nke ala deformation, ma n'ozuzu ya. omume na-aga n'ihu n'ụzọ dị anya site n'ọnụ ụzọ ámá, ruo mgbe "oghere" jupụtara. Ụdị ókèala nke kọntaktị n'etiti mmiri mmiri na udi na-ejikọta ya na okpomọkụ nke mmiri mmiri mmiri, njirimara nke ihe ọdịdị na njuputa ngwa ngwa. Ọ bụrụ na okpomọkụ nke mmiri mmiri metal dị elu, njupụta udi dị ntakịrị ma na-ejuputa ngwa ngwa ngwa ngwa, n'ozuzu na-aga n'ihu ọsọ nke mmiri mmiri metal bụ ngwa ngwa. Maka alloy aluminum na-enweghị nrụgide na-adịghị mma, interface dị n'etiti metal mmiri na udi nwere ike kewaa n'ime ụdị anọ: ọnọdụ kọntaktị, ọnọdụ nkwụsịtụ, ọnọdụ ọdịda na ọnọdụ ntinye aka.
N'ime usoro mmepụta ihe nkedo furu efu, a na-eme ka ọkpụkpụ ájá kpọrọ nkụ na-esiwanye ike site n'itinye nrụgide na-adịghị mma na ájá akọrọ n'oge usoro nkedo, nke mere na ọkpụkpụ ahụ nwere ike zuru ezu na isi ike iji guzogide mmetụta na ihe na-egbuke egbuke nke metal mmiri mmiri, ya mere, iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe na ịdị irè nke ịkpụzi n'ime usoro nkedo na nke siri ike, ma nweta nhazi zuru oke nke nkedo. Nrụgide na-adịghị mma na-enye ohere ka nkedo alloy ojii na-atụgharị na ọnọdụ furu efu. Akpụkpọ aja kpọrọ nkụ nwere ike zuru oke na isi ike iji mee ka usoro nkedo ahụ gaa n'ihu n'ebughị elu elu igbe ájá.
3 Isi iyi nke ntinye na igwe mmiri mmiri
Nsonye na gas na mmiri mmiri metal isi mmalite na-agụnye ọtụtụ akụkụ, dị ka ọdịdị nke gasification fọdụrụnụ pyrolysis ngwaahịa na gas, mmiri mmiri metal smelting usoro nke pulp bụ na gas, na pulp na-guzobere oxidation nke mmiri mmiri metal oxide, e nwere ụfọdụ gas. na nnukwu okpomọkụ nke mmiri mmiri igwe ka ọ gbazee, na irighiri ihe ndị ahụ n'ime oghere ahụ mechiri emechi ", wdg.
Ụzọ 4 iji belata nsonye na furu efu anwụ nkedo
4.1 Belata ntinye izizi na igwe mmiri mmiri
Mbelata ntinye n'ime igwe mmiri mmiri tupu awụsa ya bụ ụzọ isi belata ntinye na akụkụ nkedo ígwè. Enwere ọtụtụ ụzọ isi sachaa nchara mmiri mmiri. Enwere ike iji ihe na-eme ka mmiri dị ọcha mee ihe, ya bụ, ihe nchịkọta slag nwere ike iji. Ntinye nke obere ihe nwere ike ịkwado ya na nnukwu akụkụ nke nsonye site n'ịdabere na mgbasa ozi nke ntinye iji mepụta oke nsonye, ​​nke bara uru iji melite ọnọdụ ike nke na-ese n'elu mmiri.
4.2 Ekwesịrị ịme usoro usoro iji belata nsonye na mmiri mmiri igwe ma mee ka mwepụ nke nsonye sie ike
(1) ezi uche imewe nke agbapụtara riser usoro: dị ka o kwere mee iji ihe na-erughị otu igbe nkedo, dị ka o kwere mee iji belata oge nke metal mmiri mmiri na agbapụtara usoro, ya bụ, iji belata ma ọ bụ kagbuo onye na-agba ọsọ; Ọtụtụ ihe nkedo n'otu igbe ga-eme ka usoro ịwụsa ahụ dị ogologo. Mgbe mmiri mmiri ígwè na-agafe na usoro ntinye mmiri, ọ dị mfe ịmepụta ọgba aghara na ịgbasa na multi-bend na mgbanwe ngalaba nke usoro ntinye mmiri, nke na-ebelata okpomọkụ nke mmiri mmiri ígwè, na-eduga na ikuku oxygenation nke ígwè mmiri mmiri. scour akụkụ mgbidi nke spate na-abawanye mbụ inclusions na metal mmiri mmiri.
(2) Mbelata kwesịrị ekwesị nke nrụgide na-adịghị mma: nrụgide na-adịghị mma bụ ihe dị mkpa na-eme ka ọgba aghara na-abawanye site na ndochi mmiri igwe. Ọgba aghara na-abawanye na-eme ka ígwè a wụrụ awụ na-asachapụ sistemu gating na mgbidi “ọgba” ahụ, na-eme ka mgbawa na-akpụ vortices na-asọpụta nke na-adị mfe itinye aka na ntinye na gas.
4.3 Gbochie irighiri ihe dị n'èzí ịbanye n'ime oghere
(1) ọdịdị "oghere" na akọrọ ájá akara: ịwụsa usoro ọdịdị na nkedo ọdịdị na ájá akọrọ n'etiti akara adịghị mfe ime ka ájá akọrọ n'ime "oghere", akara na-adabere karịsịa na mkpuchi, mkpuchi mkpuchi iji mezuo ihe ndị a chọrọ. , ọkpụrụkpụ otu, ọkachasị n'ọdịdị nkuku dị n'ime, iji gbochie mkpokọta mkpuchi nke ukwuu kpatara mgbawa ma ọ bụ dapụ.
(2) belata nkwonkwo njikọ nke ọdịdị: ọtụtụ ọdịiche na-ejikọta ọdịdị ọdịdị, dị mfe ime mgbanwe dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ nke gluu ejiri na oghere ahụ, na-eme ka nkwonkwo nrapado convex ma ọ bụ concave.
(3) dị ka o kwere mee iji ezigbo ụfụfụ ịkpụzi nkedo ọdịdị na nkedo usoro ọdịdị: ma ọ bụrụ na n'ihi na nke mmepụta ogbe nwere ike na-eji efere ịcha ọdịdị, ọdịdị nke elu kwesịrị ka a na-emeso ya nke ọma, na-egbuke egbuke ma dị ọcha, mgbe ọ dị mkpa. , na ndochi mado ka ire ụtọ oghere na olulu.
Oge nzipu: Sep-14-2021